Ma jirto cid ka badbaaday shilkii diyaaradeed ee An-12 ee ka dhacay gobolka Siberiya ee dalka Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ma jirto cid ka badbaaday shilkii diyaaradeed ee An-12 ee ka dhacay gobolka Siberiya ee dalka Ruushka
Airlines • Airport • Aviation • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ma jirto cid ka badbaaday shilkii diyaaradeed ee An-12 ee ka dhacay gobolka Siberiya ee dalka Ruushka.
Badhasaabka gobolka Irkutsk ayaa xaqiijiyay in dhammaan dadkii la socday ay dhinteen, mana jirto cid ka badbaaday burburka diyaaradda.
Diyaarad nooca Turboprop ah oo nooceedu ahaa Belarusian-kii xilligii Soviet-ka ayaa ku burburtay magaalada Siberiya ee dalka Ruushka.
Diyaaradda An-12 waa diyaarad turboprop ah oo xilligii Soviet la soo saaray intii u dhaxaysay 1957 iyo 1973, ugu horrayn ciidamada qalabka sida ee USSR.
Dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu dambaysay ee musiibooyin cirka ah oo ka dhacay Siberiya iyo Bariga Fog ee Ruushka.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Ruushka ee Moscow, ugu yaraan XNUMX qof ayaa la socday Antonov An-12 Diyaarad xamuul ah oo ku dhacday Siberia, oo u dhow magaalada Irkutsk.
Diyaaradda ayaa sida muuqata iska leh Belarusian 'Grodno' airline waxayna samaynaysay duulimaad xamuul ah Siberia, Ruushka.
“2:50pm wakhtiga Moscow, An-12 diyaarad, oo u kala gooshaysay Yakutsk iyo Irkutsk, ayaa laga waayay raadaarka,” ayuu yiri sarkaal Ruush ah.
"Markii hore, laba qof ayaa la dilay, shan qof oo kalena weli lama garanayo."
Sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah, goobta shilku ka dhacay ayaa laga helay agagaarka tuulada Pivovarikha (ee gobolka Irkutsk), oo aan ka fogayn garoonka diyaaradaha. Diyaaradda ayaa markii ay soo degeysay gashay wareeg labaad ka dibna waa laga waayay raadaarka.
Sida laga soo xigtay wasaaradda xaaladaha degdegga ah ee Ruushka, markii ay goobta soo gaadheen kooxaha dab-damiska iyo samatabbixinta, diyaaradii uu la socday ayaa gubatay, balse ciidamada gurmadka ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka.
In ka badan 100 qof iyo 50 baabuur ayaa la sheegay in ay goobta ku sugan yihiin oo gacan ka geysanaya soo kabashada.
The An-12 waa diyaarad turboprop ah oo xilligii Soviet la soo saaray intii u dhaxaysay 1957 iyo 1973, ugu horrayn ciidamada qalabka sida ee USSR. Tan iyo markaas waxa ka shaqayn jiray shirkado diyaaradeed oo rayid ah oo ku sugnaa dalkii la isku odhan jiray Midowga Soofiyeeti, oo ay ugu horreyso duulimaadyada xamuulka.
2019, a An-12 Shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Lviv ee Galbeedka Ukraine, waxaana ku dhintay shan qof, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu dambaysay ee musiibooyin diyaaradeed oo xidhiidh ah Siberia iyo Bariga Fog ee Ruushka. Bishii Luulyo, shaqaalaha gurmadka degdegga ah ee baarayay waayida diyaaradda Antonov An-26 turboprop ayaa ku dhawaaqay inay soo saareen meydadka 22 rakaab ah iyo lix shaqaale ah ka dib markii ay ku burburtay meel dhagax ah oo ku taal jasiiradda Kamchatka.